गसिप Archives - Purbeli News
मोडल तथा अभिनेत्री परमिता राज्यलक्ष्मी राणा पुनः विवादमा तानिएकी छन् । बिहीबार समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले एक टिकटक भिडियोमा उनले दिएको टिप्पणीविरुद्ध खनिएका थिए । अभिनेत्री रााणले बुधार टिकटकमा सेयर गरेको सो भिडियोमा एक प्रयोगकर्ताले दिएको प्रतिक्रियामाथि टिप्पणी गरेलगत्तै उनी विवादित बनेकी हुन् । उनको टिकटक भिडियो सेयर भएपछि टिकटक प्रयोगकर्...
काठमाडौँ/ सामाजिक संजालमा कति फलोअर्स छ भन्नेमा पनि कलाकारको पपुलारिटी मापन गरिन्छ । फेसबूक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर जस्ता थुप्रै सोसल मिडियामा कलाकारहरु सक्रिय छन् । पछिल्लो समय टिकटकमा पनि थुप्रै कलाकारलाई भेटिन्छ ।सामाजिक संजालमा मिलियन फलोअर्स हुने कलाकारहरु रेखा थापा, प्रीयंका कार्की, केकि अधिकारी र अदिती बुढाथोकी हुन् । इन्स्टा र फेसबूकमा मिलियन...
इटहरी/ हाल अमेरिकामा रहेका निर्देशक श्याम भट्टराईले फेसबुकमा निर्देशक निश्चल बस्नेतप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै स्टाटस लेखेका थिए । सिनियर कलाकारप्रति निश्चलले सम्मान नगरेको भन्दै श्यामले “तिम्रो र तिम्रो बुढीको पासपोर्ट कपी मैसँग छ धेरै नबोल” धम्कीपुर्ण स्टाटस लेखेका थिए । निर्देशक बस्नेतको यस प्रकारको स्टाटसप्रति नायिका स्वस्तिमा खड्का (निश्चल पत्नी...
ईटहरी । पुर्बयुवराज पारस शाहले उनकी प्रेमिका भनिएकी चर्चित युटयुबर सोनिका रोकायालाई २४ पुरा भई २५ बर्ष लागेकोमा हिराको हार उपहार दिएका छन । सोनिका आफैले सार्बजनिक गरिएको भिडियोमा शाहले उनलाई चुम्बन गरेको दृश्य समेत देख्न सकिन्छ । खुसी मुद्रामा देखिएका पारस र सोनिकाको प्रेम सम्बन्धका बारेमा यसअघि नै चचौ हुँदै आएको छ । पारसले केही समयदेखि रोकायालाई ...
ईटहरी/ अभिनेत्री केकी अधिकारीले जाडो सुरु भइसकेको बेला इन्स्टाग्राम तताएकी छिन् । उनले इन्स्टाग्राममा केही बोल्ड तस्वीरहरु शेयर गरेकी छिन् । फोटो शेयर गर्दै उनले क्याप्सनमा ‘गर्मीका पछिल्ला दिनहरु’ भनेर लेखेकी छिन् । उनको क्याप्सन हेर्दै गर्दा अब जाडो सुरु भएकोले यसपछि उनको बोल्ड लुक हेर्न गर्मीसम्म पर्खनुपर्ने संकेत मिलेको छ । अभिनयले धेरैको मन...
ईन्स्टापछि अन्तरबार्तामा पनि प्रेमकाबारे खुलिन आचाल शर्मा, छिट्टै बिवाह गर्दै (भिडियो सहित)
काठमाडौँ/ चर्चित नायिका आंचल शर्मा र डा. उदिप श्रेष्ठको प्रेम चर्चाले अहिले चलचित्र नगरी गर्माएको छ । एक बर्ष देखिको चिनजान र प्रेमलाई यी दुवैले चाडै विवाहको नाम दिने तयारीमा रहेका छन् । हेर्नुस नायिका आचल संगको ताजा कुराकानी । सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रतिक्रिया पाईरहेकी आंचल उदिपको आगमनले आफ्नो जीवनमा सर्वाधिक खुशीको पल रहेको बताउछिन् । एक ...
ईटहरी/ चलचित्र ‘लक्का जवान’को छायांकन सकेर अमेरिका पुगेकी अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी अफेयरमा रहेको खबरले फिल्मवृत यतिबेला मज्जैले तातेको छ । उनी अमेरिका निवासी सविनजंग थापाको प्रेममा रहेको बुझिएको छ । प्रेमीलाई भेट्नकै खातिर उनी हालै अमेरिका पुगेको स्रोत बताउँछ । सविनले आफ्नो फेसबुक स्टोरीमा वर्षासँगको केही प्रेमिल तस्विर साझेदारी गरेका छन् । जसमा वर...
ईटहरी/ दर्जनौं फिल्ममा अभिनय गरेकी अभिनेत्री प्रियंका कार्की अहिले वेब सिरिजमा देखिन थालेकी छन् । अभिनेत्री कार्कीसँगको अन्तर्वार्ता नागरिक दैनिकले छापेको छ । त्यसको एउटा प्रसंग ? अभिनेता आयुष्मान देशराजसँग वैशाखमा इन्गेजमेन्ट गरेपछि असारमा विवाह गर्ने भन्नुभएको थियोरु असार त गइसक्यो त ? विवाहको मिति सरेको हो ? हो । आयुष्मान र मैले आउटडोरको लोकेसनम...